Sh. Dirir Oo Ka Hadlay Amarka Allah innagu siiyey adeecidda Nebiga CSW Iyo Qaadashada qowlkiisa iyo ficilkiisa | #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa bulshada ku baraarujiyey dhalinyarada baraha bulshada had iyo jeer akhriya ee shubuhaadka iyo was-waaska lagu furayo akhriyaan caddaymaha iyo jawaabaha culimada, aqoontoodana balaadhiyaan, diinta saxda ah cidda laga qaadanayana waa Nabi Muxummed CSw iyo saxaabadiisii RC loo raadsado, shubuhaadkaana laga feegijnaado
Khudbadii Jimcaha oo uu kaga hadlay ku dhaqanka sunnaha Nabiga CSW ayaa sheegay inay waajib tahay ku dhaqanka axaadiista nabiga CSW loona daliishado sida quraanka loo daliishanayo.
“Waxa jira dad muslimiin sheeganaya loona yaqaan munkiriin al xadiis, oo ah dad diidan in xadiiska Nabiga CSw yahay mid la daliishado, oo leh Quraanka keliyaa innagu fillan, dhinaca diinta marka la eego, arrintaasi immika ma bilaabmin.
Balse qarnigii saddexaad ayey soo bilaabmatay, culimada aad u radiyey wax aka mid ahaa Imaamul shaafici Raximahulaah, casrigana iyadoo la cusboonaysiiyey oo la xayeysiinayo ayay iclaamka ka soconaysaa, da’yartana lagu duufsanayaa.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay ogaanshaha daliilada Quraanka iyo xadiiska ee sheegaya Nabi Muxammed CSW qawlkiisa, camalkiisa iyo taqriirkiisa(waxii dadkoo samaynaya uu arkay isla markaana uu daayey) intuba inay daliil yihiin.
“Haddii la yidhaahdo sunnada Nabiga CSW daliil maaha waa diinta halaga tago, waxaynu ognahay in Quraanku inna faray salaada, sakada, soomka, iyo xajka, laakiin, faahfaahintooda iyo habka loola imanayo Nabigaa CSW caddeeyey. Ilaahay SW isagoo arrinkaa ka hadlaya waxuu yidhi “Qofka Rasuulka CSW adeeca ee ka tallo qaata, ee sunnadiisa qaata Ilaahay SW ayuu aqbalay, ka diidana adigu (Nabiga CSW) ilaalin maysid anniguna waan dultaagnahay, oo ciqaabayaa.”
Sheekh Maxamed oo ka hadlay axaadiista Nabiga CSW ee caddeynaya in xadiiskiisu yahay xujo iyo daliil lagu dhaqmayo, waxuu Nabigu CSW yidhi “Qofkii iga talloqaata Ilaahay SW ayuu adeecay, qofka anniga I caasiya Ilaahay SW ayuu caasiyey” xadiis kale oo Bukhaari weriyey waxuu Nabigu CSw yidhi, “Ummada oo dhan jannada ayey gelayaan, mid diida mooyee” Qofkii I adeeca janaduu gelyaa, qofkii I caasiya jannadii ayuu diiday, waa janno ka bood.
Waxay yidhaahdaan Quraanka ayaa innagu filan sida ?Ilaahay SW u yidhi “Kitaabka waxba kumaanu dhaafin” laakiin culimadu waxay kaga jawaabeen kitaabka la sheegayo waa Lawxul-maxfuudka.
Aayad kaloo ay daliishadaan oo Ilaahay SW ku sheegay “Quraanka Ayaan kugu soo dejinay isagoo wax walba caddeynaya” culimadu waxay ugu jawaabeen Haa, oo wax aka mid ah inuu Nabigu CSW fasiray aayadaha la isla akhrinayo, sida aayad tilmaamaysa “Waxaan Quraanka kugu soo dejinay si aad dadka ugu caddeyso”
Waxay daliishadaan aayad Ilaahay SW ku sheegay “Maanta waan idiin dhamaystiray diintiina” markii Nabigu CSw xajkii ugu dambeeyey joogay, sowta diintii la dhamaystiray ayey yidhaahdaan, waa maxay waxa la daba wado? Culimadu waxay ugu jawaabeen diinta wax aka mid ah sunnada Nabiga CSW, diin asalkeedu waa quraanka iyo sunnada.
Waxay ku doodaan sunnadu waxyi maaha? Laakiin Ilaahay Sw ayaa ta aka hadlay oo yidhi “Afka Nabiga CSW waxa ka soo baxaa waa waxyi”
Waxay ku doodaan markii Nabigu CSW qawlkiisa odhanayey, ficiladiisa samaynayey, inuu sharci dadka ugu dejiyo ugama jeedin? Ee sharcidejintu waa quraanka, taana waxuu Nabigu CSw ku beeniyey ilayn isaga ayey wax ka werinayaane, waaka yidhi “Ilaahay Sw waxuu I siiyey Quraanka iyo in le’eg oo sunnaha iyo axaadiista ee nin dhergay oo sariirtiisa jiifa yaanu diidin.”
Waxay yidhaahdaan waa sababta kala taga, ummadu intii ay quraanka haysatay ee Nabigu CSw noolaa way middaysnaayeen, laakiin markii axaadiista la qoray ayey ummadu is khilaaftay? Culimadu waxay ugu jawaabeen sharciga Quraanka iyo sunnaha diintu waa muqadas, oo iyagu ceeb ma laha, ummadu hadii ay is khilaaftay, sababteedu iyaguu ka yimi, laakiin sharciga looma aanayn karo.
Waxay sheegaan hadii lagu dhaqmo sunnaha Nabiga CSW miyaanay noqonayn in Ilaahay SW cid kale la raaciyey la yidhi iyadaa shaciga dejinaysa? Sowka Ilaahay SW yidhi “Xukunka Ilaahay SW keligii ayaa leh” xukunka Ilaahay SW keligii ayaa leh, oo hadii la yidhaahdo Nabigaa CSw sharci dejiyey, miyaanay cid kaloo sharci dejin soo bixin? Markaa xadiiska aayadaa ayaa diideysa ayey yidhaahdaan? Culimadu waxay ugu jawaabeen Ilaahii Sw sharciga dejinayey ayaa aayadahan aynu soo khrinay innagu faray in Nabigu CSw sharciga inoo dejinayo, waxuu Nabigu inoo keenaana waa wax Ilaahay SW ogol yahay.
Waxay yidhaahdaan sunnaha Nabiga CSw lama xafidin, sida Ilaahay u ballanqaaday inuu Quraanka ilaalinayo “Quraanka anaa soo dejiyey ilaalinayana” sunnaha Nabiga CSw lama ilaalin ee wax badan ayaa lagu dhexdaray? Waa beentii ayaa la yidhi Ilaahay SW wuu ilaaliyey, waxuu ku ilaaliyey culimo kala shiilay, waana la kala yaqaanaa sunnaha sugan iyo kuwa la sameeyey ee daciifka ah, waanay qoran yihiin. Culimadu jawaabahaa iyo kuwo ka sii faahfaahfsan ayey siiyeen. Markaa waxaynu u sheegayaa dhalinyarada baraha bulshada had iyo jeer akhriya ee shubuhaadka iyo waswaaska lagu furayo akhriyaan caddeymaha iyo jawaabaha culimada, aqoontoodana balaadhiyaan, diinta saxda ah cidda laga qaadanayana waa Nabi Muxummed CSw iyo saxaabadiisee RC loo raadsado, shubuhaadkaana laga feegijnaado